Bianco sy Croix Rouge Malagasy: apetraka ny ady amin’ny kolikoly | NewsMada
Vita omaly ny sonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly sy ny Croix Rouge Malagasy (CRM). Nanatanteraka izany fifanarahana haharitra roa taona izany ireo birao vaovao eo amin’ny Croix Rouge Malagasy.
Tanjon’ny fifanarahana ny hanentana sy hampianatra ny mpiasan’ny CRM hanana fitondran-tena manohitra ny kolikoly sy hanana toe-tsaina mandala izany. Eo koa ny hampianatra azy ireo handà ny endrika kolikoly amin’ny sehatra rehetra hiasany.
Ankoatra izao, hanangana ny rafitra sy ny antanantohatra maneho ny mangarahara tsy hampisy ny tranga kolikoly amin’ny fintanana sy sehatra rehetra ao amin’ny CRM.
Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny politikan’ny Bianco sy ny fandaharanasan’ny CRM ho amin’ny fitantanana mangarahara sy marina izao fiaraha-miasa natao sonia, omaly izao. Hitondra fampandrosoana maharitra eto amin’ny firenena ihany koa izany raha voahaja antsakany sy andavany.
Hanampy ny CRM, araka izany ny Bianco amin’ny fanatanterahana ny drafitrasa apetraka momba ity ady amin’ny kolikoly ity.
Raha tsiahivina, nisy nofy ratsy teo amin’ny CRM teo aloha mikasika fanodinkodinam-bola ary nahatonga ny mpamatsy vola hampiato ny fanampiana.